zimbabwe land reforms on News24
ARTICLES RELATING TO ZIMBABWE LAND REFORMS
A group of white farmers in Zimbabwe who lost their land say they will sue both Jacob Zuma and the SA government, and they hope to file their court papers "in the next few days".
Resizing of land 'will be a big test for Zim govt to rope in white farmers'
Zim war veteran's wife loses land to Chinese – report
The wife of a Zimbabwean liberation fighter, Vitalis Zvinashe, has reportedly been forced to give up a huge part of her land to a Chinese investment firm that was allegedly given the land to set up a ceramic tiles factory under controversial circumstances.
Zim politician 'reclaims seized farm from Mugabe's daughter Bona' – report
A Zimbabwean politician has reportedly reclaimed his farm from former president Robert Mugabe's daughter Bona and her in-laws after they allegedly seized it from him four years ago.
Zim army 'evicts President Mnangagwa's neighbour from his farm' – report
The Zimbabwe National Army has reportedly evicted President Emmerson Mnangagwa's neighbour in Kwekwe's Sherwood farms after the central government re-allocated his farm to the army.
Ex-Zanu-PF leader 'must co-exist with the white farmer'... at least for now – court
The High Court of Zimbabwe has reportedly stopped a provincial minister from evicting an ex-Zanu-PF youth leader from his farm.
Top Africa stories: Zim land, Africa’s strongest man, Mozambique
A Former-Zanu-PF official is set to lose his 'grabbed' farm to former a white owner, and Cheick Sanou from Burkina Faso wants to be the world's strongest man.
Foreign former landowners from Zimbabwe may get compensation before white farmers, Ben Gilpin, director of the Commercial Farmers Union has told News24.
Zim has 'immense potential to become Africa's breadbasket', says VP Chiwenga
Zimbabwe has "immense potential to become Africa’s breadbasket", the country’s vice president Constantine Chiwengwa has reportedly said.
Two years ago, a black Zimbabwean farmer saw a white farmer thrown off land by a violent mob. Now the two work together in a partnership that they say could be a model to save the country's ruined agricultural sector.
Mnangagwa admits Mugabe's chaotic land reforms 'robbed Zim of its breadbasket status' – report
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has reportedly admitted that the country's controversial land reform programme carried under former president Robert Mugabe's government caused serious shortages in "farm productivity".
Zimbabwe’s main opposition, the Movement for Democratic Change Alliance, has reportedly ruled out repossessing land from those who benefitted from former president Robert Mugabe’s chaotic land seizures should it win the coming elections.
Zim: Ex-Zanu-PF youth leader sues minister over 'grabbed' farm
Zimbabwe's ruling Zanu-PF ex-youth leader Kudzai Chipanga has reportedly taken Manicaland Provincial Affairs Minister Monica Mutsvangwa to court for allegedly taking his farm and giving it back to its previous white owner.
Zim: Ex-Zanu-PF official to lose 'grabbed' farm to former white owner – report
Former Zanu-PF youth leader Kudzai Chipanga is reportedly set to lose his farm after Zimbabwean authorities said that they are "planning to give it back to its previous white owner".